ulwazi pa esebenzayo eziqokelelweyo ukusebenzisa le site data Unikimbie Seven
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ ulwazi pa esebenzayo eziqokelelweyo ukusebenzisa le site data Unikimbie Seven
Kukho indawo pa ukuba isiza data Lobo Seven. Ngendlela efanayo P-WORLD of site lolwazi kwezoshishino, ungabona ezifana ekhangela iinkcukacha umfuziselo iholo pa, iintlobo ulwazi. E
, kodwa kunokuba ucinga ukuba okanye hayi iyafana njengoko P-WORLD, njengoko igama site data Lobo Seven, kule sayithi, idatha ethile kunye pa umatshini omnye ngomnye, nesendlu pa eziye imifuziselo abhaliswe idatha sele sibonile, waba ubuninzi lweempawu.
data sibonile, inombolo jackpot amaxesha, qala isantya ojikeleza ngaso, oko kubonakala de inani yokudlala. Ngoxa ehlala ekhaya, ngendlela efanayo ukujonga Robo data kwi nesendlu pa, nayo iye yaba lula ukuya kusuku olulandelayo kweqonga ukukhetha.
xa ukuqokelela idatha eliqhelekileyo ngenye imini, uya ivenkile fans ivaliwe nje ngaphambili, ndicinga ukuba kukho zininzi iindlela ezithi phawula namnye lwe data.
Kodwa akufuneki ukuya ku elibe fans yonke imihla, ukubulaleka nayo iyafuneka, xa inqaku ephosakeleyo, yaye musa ukuya evenkileni ngosuku olulandelayo, wenza into yokuba idatha echanekileyo andazi, ukusebenza Akuncedi nto ukuba ngokungqalileyo.
Ngoko ke, eyiyo ukusebenzisa le site data Robo aSixhenxe, kwaye kusenokwenzeka ukuba ngokulula aggregate omnye ngomnye data of pa parlour nganye.
Okokuqala, ukudala itafile data kwi kwikhaya ikhompyutha siqu. Apho, isiza data Robo ezisixhenxe, kusenokwenzeka ukuba khuphelo no colo yafunyanwa data itafile. Data ukuze ikopishwe linani umkhosi ibhola ngokupheleleyo yaye inani lilonke yeenguqu.
ngale, kuba kunokwenzeka ukuba ukujonga omnye umatshini single kwamanqwanqwa zahlulwe. Ukuba ufake indlela, ukwahlulwa umatshini kunye zombini umatshini kunye itotali yepesenti imini ngemini enye, kulula kakhulu kuba kungaba ibalwe.
Xa yokubala umatshini uphuphu, uya kuba nako ukuqonda imini kunye etafileni oluthile iyonke le meko. Le yokuqala kungabonwa kuphela, nesendlu pa Day Ekubeni wabona data ekhaya, kwaye kwakhona isigqibo oseqongeni injongo ngomhla elidlulileyo, xa okunene yiya elibe fans, uya kukwazi ukuba bagxininise kwi lihlole isikhonkwane.
ukuqokelelwa kwedatha, ngenxa yokuba ixesha nomgudu, unayo kubalulekile ukuba mhlawumbi umsebenzi ngayo kulula ngqo. Data isiza Robo ezisixhenxe indawo wafumana ukufumaneka data esinzima kwi kwezinye iisayithi.
Noko ke, uyakwazi ukubona data, kuya kuba kuphela, nesendlu pa ezibhaliswe, nesendlu pa ukuba kuya kuba loo nto akwenzi ngqiqo xa ubhalisile. Ke, ukubona umahluko phakathi P-IHLABATHI, ngoko wajika ukuhlawula, ndicinga ukuba indawo ebizwa okanye kuthathwa njengento bill ulwazi.
inxalenye ufunda nokulatyuza data, ngoko ke okunene ukuba mnye, elibe pa, Kukhethwa ngaphandle kwamathandabuzo. Zingalula ngaphandle ukusetyenziswa kwexesha, kuba indlela ukusetyenziswa data, zama.